ArticleFeb 17, 2020
सद्‌गुरुः “जीवन पीडा हो वा आनन्द ?” मलाई कसैले सोधेका थिए । मैले जवाफ दिएँ, "यदि तपाईंसँग विकल्प भएको भए तपाईं के रोज्नुहुन्थ्यो ?"
प्रत्येकको रोजाइ सबैभन्दा उच्च स्तरको प्रसन्न भाव नै हो । यद्यपि, हामीले आफैँलाई दुःख–कष्ट निर्माण गर्ने मेसिन बनाएका छौँ । यो किन हो भने, हामीले आफ्नो मानसिक ढाँचामा यो सृष्टिलाई विभाजित गरेका छौँ । एकपटक जब तपाईं सृष्टीलाई "राम्रो" र "नराम्रो", स्वीकार्य र अस्वीकार्य भनेर विभाजन गर्नुहुन्छ, तपाईं आनन्दको सम्भावनालाई पूर्णतया परित्याग गर्नुहुन्छ ।
आधुनिक विज्ञान र योग–परम्पराले यो स्वीकार गरेका छन् कि ब्रम्हाण्डको केन्द्र भनेको मूलतः निश्चलता (स्थिरता) हो । हामीलाई बिग ब्याङ्गको सिद्धान्त र आकाशगङ्गfहरू विस्फोट भएका सिद्धान्तहरूका बारेमा थाहा भए तापनि, ब्रम्हाण्डको विशाल हिस्सा शून्य रहेको छ । यसलाई योग परम्परामा "शि-व" अर्थात् “त्यो जुन छैन" भनिन्छ । यही सृष्टिको मूल स्रोत हो, परमाणु देखि ब्रम्हाण्ड सम्मको मूलभुत आधार हो । यदि मानिसहरूलाई भौतिक र मानसिकभन्दा पर जीवनलाई जान्नु छ भने, यो अपरिहार्य छ कि उनीहरू स्थिर बन्नुपर्छ ।
यही स्थिरताबाट गतिशीलता उत्पन्न हुन्छ, जसले ब्रम्हाण्डलाई व्यक्त हुन वा प्रकट हुन दिन्छ । यसैले सृष्टिलाई यति समृद्ध बनाएको छ । यही उल्लासले हामीलाई जीवनमा सहभागी हुन दिन्छ, सृष्टिसँग संलग्न हुने अनुमति दिन्छ । मानव शरीर प्रत्येक क्षण सिधै मृत्युतर्फ लम्किरहेको हुन्छ, जबकि मन चाहिँ भ्रम र अन्यौलको स्थितिलाई अझ प्रखर बनाउन तल्लीन भएको हुन्छ । उत्साह नहुँदो हो त मानिसको जीवन साँच्चिकै असम्भव हुने थियो ।
तथापि, तर्कहीन र विरोधाभाषपूर्ण जस्तो आभास हुने सृष्टिसँग संलग्न हुनको लागि हामीलाई मादकता जरूरी हुन्छ । यही मादकताले शिवलाई वैरागी र नर्तक, तपस्वी र गृहस्थको मोहक मिश्रण बनाएको छ । यही मादकताले उनलाई अनुरागी र वैरागी बनाएको छ— जीवनसँग गहिरो रूपमा संलग्न छन्, यद्यपि त्यसबाट अछुतो रहेका छन् ।
पौराणिक कथाहरूमा प्रायः शिवलाई जतिबेला पनि नशाको अवस्थामा रहेको देखाइन्छ । तर, शिव नशा उपभोग गर्दैनन् । उनी स्वयं नशा हुन— नशाको मूल स्रोत हुन् ।
हामी शुरुदेखि नै विभिन्न तरिकाहरूले मादकता वा नशामा रहने प्रयास गरिरहेका छौँ । कोही यसलाई प्रेमको माध्यमले खोज्ने प्रयास गर्छन् । कोही मदिरा र अन्य यस्तै रासायनिक पदार्थको सहारा लिन्छन् । मादकता भनेको मूलतः घर्षण कम गर्ने माध्यम हो, संसारसँगको संलग्नतालाई सहज बनाउने माध्यम हो । मादकताले हामीलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा समेत नम्य र परिवर्तनशील भई जीवनसँग खेल्नका लागि समर्थ बनाउँछ— सङ्घर्ष र द्वन्द्वको डरले आफ्नो सहभागिता र संलग्नतालाई कम गर्ने होइन ।
मादक पदार्थहरूमा एउटै समस्या यो छ कि यसले हाम्रो क्षमता र सामर्थ्यलाई नष्ट गर्दछ । यद्यपि, यदि हामीले आफूभित्रको नशा वा मादकताको उपयोग गर्न सक्यौँ भने, हाम्रो शारीरिक र मानसिक गतिविधिहरू पूर्णतया सहज र निर्बाध हुनेछन्, जसले हाम्रो क्षमतालाई अझ वृद्धि गर्दछ— र, त्यसबेला पनि हामी चरम आनन्दको अवस्थामा हुनेछौँ । पौराणिक कथाहरूमा प्रायः शिवलाई जतिबेला पनि नशाको अवस्थामा रहेको देखाइन्छ । तर, शिव नशा उपभोग गर्दैनन् । उनी स्वयं नशा हुन्— नशाको मूल स्रोत हुन् ।
यी तीन गुणहरूलाई हामी होहपूर्वक कसरी आफ्नो जीवनमा विकसित गराउन सक्छौँ ? महाशिवरात्रि एउटा अद्भुत रात हो, जहाँ हामी पूर्ण विकसित मानवमा प्रस्फुरित हुन सक्दछौँ । तपाईं यो सरल अभ्यासलाई प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ । पूरै दिनमा, विभिन्न समयहरूमा कुनै पनि आसनमा रहँदा स्थिर र मौन रहने प्रयास गर्नुहोस् । सूर्यास्त भएपछि आफूमा उत्साह, उन्माद र नृत्य ल्याउनुहोस् । यदि तपाईं दिउँसो स्थिर रहेर रातभरी जाग्राम बस्नुभयो भने, तपाईंले आफूमा एक प्रकारको मादकता फैलिएको अनुभूति गर्नुहुनेछ ।
जो व्यक्तिमा शिव व्याप्त हुन्छन् वा फैलिएका हुन्छन्, उसलाई कुनै पनि चीजको तीव्र चाहना गर्नु पर्दैन, कुनै पनि चीजप्रति रुन-कराउन पर्दैन । अब कुनै पनि कुराले महत्त्व राख्दैन । जब कुनै पनि कुराले महत्त्व राख्दैन, तब सबैथोकले महत्त्व राख्दछ ! जब केही विशेष कुराहरू मात्र महत्वपूर्ण हुन्छन्, तब तपाईं उल्झनमा पर्नुहुन्छ, बन्धनमा फस्नुहुन्छ । जब सबैथोकले महत्त्व राख्छ, तब तपाईं स्वतन्त्र बन्नुहुन्छ ! त्यसबेला, तपाईं जीवनको अत्यन्तै मादक स्वच्छन्दता वा खुलापनले निथ्रुक्कै भिज्नुहुन्छ । तपाईंले जीवनको शिखरलाई स्पर्श गर्नुभएको हुन्छ । जब तपाईं त्यो प्रखर, केन्द्रिकृत, विशुद्ध जीवनको सम्पर्कमा आउनुहुन्छ, त्यसबेला तपाईंले वास्तवमा "शिव" लाई स्पर्श गर्नुभएको हुन्छ ।